Spotify manatsara ny fiasa | TeraNews.net
Manatsara ny fiasa ny rindrambaiko Spotify
mpanoratra Kravetz Pavel Navoaka tamin'ny 07.12.2020
Pikantsary mahaliana an'ny kinova Beta an'ny application Spotify no tonga tamin'ny Internet. Misy ny mety hanatsarana ny programa Spotify amin'ny fampiasa. Ny serivisy hikarohana mozika ao amin'ny tranomboky manokana dia hiseho ao amin'ny sehatr'asa raha toa ka tsy misy fifandraisana amin'ny tahiry fampiharana.
Inona ny Spotify sy ny antony ilainao izany
Spotify dia serivisy ahafahanao mihaino mozika amin'ny Internet ara-dalàna amin'ny Internet. Ny tena mampiavaka ny programa dia ny algorithman'asany. Ampy izay ny fihainoana hira roa ho an'ny serivisy mba hampifanarahana azy ireo amin'ny tsiro mozikan'ilay mpihaino. Amin'ny faran'ny playback playlist, ny programa dia hahita mozika vaovao ary hanolotra azy hihaino azy. Raha ny fanamarihan'ny mpampiasa, ny 99% amin'ny fampiharana dia “maminavina” ny tombotsoan'ny tompony.
Azonao atao ihany koa ny manadino ny fisintomana ireo fanangonana mozika avy amin'ny torrents mandrakizay. Ny serivisy mihitsy no manambatra ny Mixes amin'ny làlana malaza indrindra isan'andro, herinandro, volana, taona. Azonao atao ny manasokajy ny mozika mifanaraka amin'ny masontsivana samihafa.
Mila mandoa vola ianao raha hampiasa Spotify. Na ny marina, misoratra anarana mandritra ny fotoana fampiasana. Ny vidin'ny serivisy dia tsy mitovy amin'ny firenena tsirairay. Iza no manoratra ny vidin'ny vidiny. Satria any amin'ny firenena manankarena sasany dia lafo ny vidin'ny Spotify. Ary any amin'ny firenena mahantra (mitovy amin'ny dolara mitovy) dia tsy maintsy mandoa 5-10 heny ianao.
Mazava ho azy, tsy mila mandoa na inona na inona ianao amin'ny fampiasana Spotify maimaim-poana. Saingy tsy maintsy miaritra ianao dokam-barotra, fandrarana ny fampidinana mozika ao amin'ny fitehirizanao. Ary koa, fahasahiranana roa momba ny fanovana ny kalitao sy ny lalana tsy voafetra.
Raha ny marina dia tokony nampiditra fikirakira fanatsarana nandritra ny fotoana ela ireo mpandahatra programa. Rehefa dinihina tokoa, dia voaloa ny fandaharana ary ny serivisy dia tokony ho amin'ny sehatra sahaza azy. Ny kinova beta dia nanampy ny fahaizana mihaino mozika ivelan'ny Internet. Ho an'ity dia hisy scanner iray hiseho ao amin'ilay programa, izay hikaroka ireo làlana ao amin'ny fitehirizana smartphone amin'ny lahatahiry rehetra. Raha ny tokony ho izy, ity fampiasa ity dia mitovy amin'ny serivisy "mix offline" Youtube.
Na dia mangataka vola aza ny fangatahana dia manamora ny fiainan'ny mpampiasa izany. Mazava ho azy ho an'ireo izay manome ny safidiny ny vokatra vaovao, fa tsy "manosotra" ireo làlana taloha mankany amin'ny lavaka.
Fomba vaovao hahazoana vola amin'ny fitoriana an'i Apple
Honor Pad 7 no takelaka voalohany an'ny marika sinoa tsy miankina
Xiaomi dia nibolisatra tamin'ny toerana faha-3 tamin'ny fivarotana finday avo lenta